ဦးသန်းရွှေ အိမ်မှာ စာဖတ်နေသည် | ဧရာဝတီ
ခင်ဦးသာ| November 17, 2011 | Hits:1,825
7 | | ယခင်စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေသည် ၎င်း၏နေအိမ်၌ စာဖတ်ခြင်းဖြင့် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက အင်္ဂါနေ့တွင် ပြောလိုက်သည်။
“(ဦးသန်းရွှေက) သူ့အိမ်မှာပဲ ရှိနေပါတယ်၊ သူ့အိမ်မှာနေပြီး စာတွေ အများကြီး ဖတ်နေပါတယ်” ဟု ဦးကျော်ဆန်းက ပြောဆိုကြောင်း Wall Street Journal တွင် ယနေ့ ဖော်ပြထားသည်။
ရာထူးမှ အနားမယူမီ ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်သည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ညစာစားပွဲတွင် တွေ့ရသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ဓာတ်ပုံ-AP)
လွန်ခဲ့သည့် ၈ လခန့်က စစ်အစိုးရမှ အရပ်သားအစိုးရသို့ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်သည့်ကာလတွင် ဦးသန်းရွှေ အနားယူသွားသည်ဟု ဆိုသော်လည်း စစ်ဝတ်စုံဖြင့် ရိုက်ကူးထားသည့် သူ၏ဓာတ်ပုံများကို မကြာသေးမီ ကာလကအထိ အစိုးရရုံးများတွင် ချိတ်ဆွဲထားဆဲဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။
အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လိုလားသူနှင့် သဘောထား တင်းမာသူ ဟူ၍ အုပ်စု နှစ်စု ကွဲပြားမှု ရှိမရှိဟူသော မေးမြန်းချက်ကို ဦးကျော်ဆန်းက အမြင်မတူသည့်အခြေအနေများကြားမှ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး အကျိုး အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့် မူဝါဒများကို ညှိနှိုင်းချမှတ်နိုင်ခြင်းသည်ပင်လျှင် ဒီမိုကရေစီ၏ အနှစ်သာရ ဖြစ်သည်ဟု ပြောလိုက်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်နှင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် တာဝန် ယူထားသူ ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက ရှင်းချက် ထုတ်ထားသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်း မကြာသေးခင်က ဆိုင်းငံ့လိုက်ခြင်းကြောင့် တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး ထိခိုက်မှု မရှိကြောင်း၊ တရုတ်ကုမ္ပဏီ အများ အပြား မြန်မာနိုင်ငံ၌ လုပ်ကိုင်နေသကဲ့သို့ တခြားနိုင်ငံ၊ တခြားလူမျိုးများ လာရောက် လုပ်ကိုင်လျှင်လည်း ယခုကဲ့သို့ ၀ိရောဓိမျိုး ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဟု ၀န်ကြီးက ဆိုသည်။
ကချင် ဒုက္ခသည်များ ၀မ်းပျက်ဝမ်းလျှော ဖြစ်ပွားနေ
117 Responses	← Older Comments
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment fighter2November 18, 2011 - 1:57 pm	I agreed with fighter. I am not the government person. I respect all the nation in our country . BUT NOT FOR KIA AND ANY OTHER INSURGENT GROUP. THEY ARE NOT DOING FOR THEIR PEOPLE. THEY ONLY DOING FOR THEMSELVES. HA HA.
ALL THE INSURGENT GROUP , “REMEMBER” NOW YOUR FIGHTING FOR WHAT. WHAT YOU CAN DO FOR YOUR PEOPLE. ONLY YOU ALL CAN GIVE THE TROUBLE. HA HA
REMEMBER “ONE DAY ONLY”
I AM TOTALLY AGREED WITH THAT WORD.
Reply	Thant November 18, 2011 - 4:38 pm	I also agree it
Reply	HAN November 18, 2011 - 5:14 pm	HEY,,,,, U R Stupid @ Crazy..
what !!! do you have nuclear??????
Why you want to be killer ????
I am not Kachin,, I M irrawaddy guy
Reply	Moe November 18, 2011 - 2:10 pm	ကျော်ဆန်းအိမ်မကြာခင် ဗုံးကွဲ တော့မယ်
Reply	MMO November 18, 2011 - 2:12 pm	than shwe is reader.you are lier.you(kyaw san) speak vary bad word for kachin state & your country
Reply	MMO November 18, 2011 - 2:19 pm	Read kyaw san these words with than shwe.ok.
Reply	ko ye November 18, 2011 - 3:02 pm	ဘာဘဲပြောပြော သံဃာတော်တွေကို သတ်တဲ့ ငရွှေ ဓါတ်ပုံကိုတော့ မမြင်ချင်တော့ဘူး သူဘာသာ စာဖတ်တာလဲ မကြားချင်ဘူး အသေဆိုးနဲ့သေတာပဲကြားချင်တယ်
Reply	peace November 18, 2011 - 3:56 pm	Mr Than Shwe reading about how to die. May he know that how to die properly.
Reply	Htun Lat November 18, 2011 - 4:16 pm	သန်းရွှေစာဖတ်တာတွတ်ပီရဲ့ စာတွေပါ။ တွတ်ပီဆိုတာကချင်မျိုးနွယ်လီဆူးစကား
ရဲ့ အဓိပ္ပယ်က ကိုပြော
Reply	kayinlay November 18, 2011 - 4:47 pm	Yes! sai shwe mern is RIGHT! WE all fee like that we hate burmese
Reply	zzzm November 18, 2011 - 4:55 pm	သန်းရွှေစာဖတ်နေတယ်ဆိုတော့ Myanmar Love Stories site လေး share ပေးလိုက်ပါဦး
Reply	အမည်မဖော်ပြလိုသူ- November 18, 2011 - 5:27 pm	ကျွန်တော်ကတော့ ကချင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခံဘက်က ရပ်တည်မယ်။ အစိုးရက သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ အရင်ကတည်းက ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုဒါ။ ဒီအချိန်မှာ အစိုးရကိုလည်း မုန်းနေဒါ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တရားမျှတမှုရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အစိုးရရဲ့ မှားယွင်းစွာ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်ဆံခြင်းကြောင်း အခုလို ဗမာစစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားအကြား မကျေနပ်မှုကြီးထွားခဲ့ဒါပါ။ ဒါဆိုရင် ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားရမလား။ အဲလိုလဲမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဘက်ကို တစ်ဘက် အပြစ်တင်နေမယ့်အစား အပြန်အလှန်သေချာညှိနှိုင်းရင် ရပါသေးတယ်။
Reply	ကိုလွင်တိုး November 18, 2011 - 6:23 pm	ရွှေသွေးဂျာနယ်တို့ …တေဇရုပ်စုံတို့ ဖတ်နေတာဖြစ်မှာပေါ့…
Reply	နေတိုး November 18, 2011 - 6:43 pm	ဉီးကျော်ဆန်းရာခင်းဗျာပြောတာဟုတ်ရဲ့လားကချင်ပြည်နည်မှာလာကြည့်လိုက်လေ
Reply	Min Hsu Mon November 18, 2011 - 7:15 pm	……ကျော်ဆန်း အရူးထပြီးပြောနေတာကို ယုံပြီးတော့ သွေးမကွဲကြပါနဲ့..
Reply	rcheball November 18, 2011 - 7:46 pm	ဟားဟားဟား
သောက်ပေါကြီး ကျော်ဆန်းပဲ။ မင်းပထွေးသန်းရွှေ ကာတွန်းစာအုပ်ပဲဖတ်တာ လူတကာ အသိပဲ။ မင်းနိုင်ငံတကာ မီဒီယာမှာပါလာပြီး ညာဖြီးမနေနဲ့။ မင်းပြောတာ ဘယ်သူမှ မယုံဘူး။
Reply	kspnc November 18, 2011 - 10:57 pm	still government= the new bottle in an old wine
Reply	ကိုစိုင်း November 18, 2011 - 11:14 pm	Comment တွေကို ကြည့် ပီးး ရီရလွန်းလို့ ထမင်းတောင် မစားနိုင်ဘူး… တကယ်ပါပဲ ~~ ဟားဟားဟား ~~~~ ဘာတဲ့ ~~ နိုင်ငံ မတိုးတက်တာ ကိုသန်းရွှေကြီး စာပေမဖတ်လို့ ~~ စာပေကို အရမ်းဖတ်သင့်တယ်လေး.. ဘာလေး ညာလေးနဲ့ ..~~ဟားဟားဟား ~~ စာပေကို လေ့လာလိုက်စားဖို့ တိုက်တွန်း အကြံပေးတဲ့ လူ အားလုံးရဲ့  ကေါမန့် တွေမှာ တစ်ယောက်မှ စာလုံးပေါင်းမမှန်ဘူး ~~ မယုံမရှိနဲ့ သေချာဖတ်ကြည့် ~~ ဟားဟားဟားဟား……….. ~~~~ ဒီကြားထဲ … ~~’ ဓါးမြ ‘ ကိုတောင် စာလုံး ဘယ်လိုပေါင်းရမှန်း မသိတဲ့ ကေါင်က ကေါ့မန့် ၀င်ပေးထားသေးတယ် ~~~ ဟားဟားဟာ
Reply	အညာသားကြီး November 19, 2011 - 7:26 am	မောင်စိုင်း … ဒါးမြ ။ဓါးမြ ဓါးပြ ဘယ်ဟာက မှန်သလဲ ဆိုတာလဲ ပြောပြပါအုံး…မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ ကျမ်းတော့ ဆောင်ထားပါအုံး..ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူတတ်ကြီးလို့ထင်ရင်တော့ မင်းလဲ တချို့သော စစ်ဗိုလ်တွေလို ငါအကုန်သိ ငါအကုန်တတ် အသိုင်းအ၀ိုင်းကထင်ပါရဲ့..စာပေလေး ဘာလေးလဲ လေ့လာပါအုံး..မင်းဘာကောင်လဲဆိုတာ မင်းအပြောနဲ့တင် သိသာပါတယ်ကွာ..ဟိ..ဟိ..
Reply	ကိုစိုင်း November 21, 2011 - 6:56 pm	ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟား …. ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ အညာသားကြီးရယ် ….. ဟားဟားဟား..~~တစ်ခုတစ်လေလေး တွေ့တဲ့ အမှားကိုထောက်ပြမိတဲ့  လူကိုလည်း အလွတ်မပေးဘူးနော်~~ စာပေ ထပ်ပီး လေ့လာခိုင်းနေပြန်ပီ ~~ဟားဟားဟား တကယ့် ” ကျွဲ ပါးဆောင်းတီး” ပဲ ~~~ ဟားဟား ~~ မှတ်ချက် ~~ ကျွဲပါး ကို ဆောင်းနဲ့ ရိုက်ခြင်းမျိုး ဟု တွေးထင်မိရင်လည်း လက်ခံပါသည် ~~ နားလည်ပေးနိုင်ပါသည် ~~ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထပ်ရှင်းပြလျှင် ထပ်ပီး ~~~~~ ဟားဟားဟားဟားဟားဟားဟား
Reply	bawa November 19, 2011 - 5:53 pm	Dar pya or dar mya????
Reply	phothar November 19, 2011 - 1:16 pm	ကချင်တွေကောင်းမကောင်း ကချင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့ တခြားတိုင်းရင်သားတွေအသိဆုံးပါ။
Reply	tto November 19, 2011 - 2:03 pm	သြော်အတော်သရမ်းတဲ့(ပါးစပ်ကိုပြောတာပါ)ကျော်ဆန်းပဲသူ့ကြောင့်နဲ့တော့သွေးမကွဲကြပါနဲ့ …
သူ့ကိုတော့ ၀န်ကြီးတစ်ယောက်လို့တောင်မြင်မထားတာအကောင်းဆုံးပဲ ဘာတွေပြောလို့ပြောမှန်းကိုမသိဘူး
စကားမစပ် ဦးစံမတူကြီးနဲ့မတူဘူးလား ဦးစံမတူကိုတော့အားနာပါတယ် …
Reply	ကိုဖီ November 19, 2011 - 8:05 pm	နေကျစမ်းပါဥိးဗျာ၊ကျော်ဆန်းပြောတါKIAကိုပါ။ခင်ဗျားတို့ဟာကKIAနဲ့ကချင်လူမျိုးနဲ့ရောနေပြီ။ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ၊ သူ့ တပ်တွေမုဒိန်းကျင့်တဲ့ကချင်အမျိုးသမီးတွေကတော့KIA members များမဖြစ်နိုင်တာကတော့သေချာပါတယ်
Reply	ဦးသန်းရွေ November 19, 2011 - 9:52 pm	မောင်တို့ မယ်တို့ 
ယနေ့ အချိန်ဟာ နိုင်ငံသား အချင်းချင်း ဖျက်လို ဖျက်ဆီး ရန်လိုတဲ့စကားတွေ ပြောကြမယ့်အစား ညီနောင် တိုင်းရင်းသား တွေ သွေးစည်းညီညွတ်စေမယ့် စကားတွေသာ ပြောကြစေလိုတယ်၊ ဒါမှ ဒီမိုကရေစီ ချီတက်တဲ့ နေရာမှ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာတဲ့ နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်နိုင်မယ်၊
Reply	ပေါက်စ November 20, 2011 - 12:21 am	ကျော်ဆန်းတရက်တည်းနဲ့တိုက်တာ သူမိန်းမနဲ့ဖြစ်
ပါလိမ့်မယ်။ စကားပြောမှားတာပါ။ ကလေးစစ်
ရဲဘော်တွေကိုသားသမီးချင်းမစာမနာပဲတရက်တည်းနဲ့တိုက်မယ်တဲ့၊အင်တာဗျူးမှာတောင် နေပုံထိုင်ပုံကအဆင့်အတန်းလုံးဝမရှိဘူး။သူဖြစ်သင့်တာဇတ်ထဲက၀န်ကြီးပဲ။ တော်သေးတယ်ဗျာ
Reply	မင်းဝတ် November 24, 2011 - 11:34 pm	ခင်ဗျားကိုအတွင်းသိအဆင်းသိ ငယ်ဘ၀မမေ့နဲကိုကျော်ဆန်း အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆိုတော့ဟစ်တိုင်ကနေလွတ်လပ်စွာအော်ပြီးသတ္တိပြမနေနဲ့ ခင်ဗျားမိန်းမသိပ်ကြောက်တာကျွှန်ပ်တို့တရွာလုံးသိတယ်။လူမျိုးရေးသွေးခွဲစကားမပြောပါ
Reply	bawa November 20, 2011 - 4:28 am	U Than Shwe is reading to take Burmese Matriculation exam cause he has not passed this yet!!!:)
Reply	ဒေါက်တာမွှေကြီး November 20, 2011 - 11:41 am	ကမ္ဘာကျော်ရတနာဝင်းထိန် ပေါင်းချုပ်ကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် အသေအလဲ ဖတ်ရှု.လေ.လာနေတာပါး)
Reply	ဆရာ၇ာ November 20, 2011 - 5:12 pm	ဘာဘဲ့ပြောပြော ကချင်ဒေသကိုဗမာ (မြန်မာကိုဗမာဟုအသံထွက်သည်)ပိုင်တယ်။ဗမာ လက်အောက်ခံမလုပ်ချင်ရင်လွတ်လပ်ရေးရအောင် တိုက်ယူရမှာဘဲ့။မအောင်မြင်ခင်တော့သူပုန်ဘဲ့။ ဒါဘဲ့၊ဘာမှဆက်ပြောနေစရာမလိုဘူး။
Reply	LuGyiMin November 20, 2011 - 6:28 pm	>”KIA ကို တိုက်မယ်ဆိုရင် တရက်တည်းနဲ့ အပြတ်အသတ် ချေမှုန်းပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က မတိုက်ခိုက်ပါဘူး”
>အပြီးသတ် ချေမှုန်းလိုက်ရင် စစ်တိုက်စရာမရှိတော့ဘူး။ စစ်တိုက်စရာမရှိရင် စစ်တပ်က ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူး။ လုပ်စရာမရှိရင် ဘေးရောက်ပြီး အရေးမပါတော့တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တခုဖြစ်သွားမယ်။ အရေးမပါတော့ရင် သူတို့ကို ဘယ်သူတွေ အရေးတယူလုပ်မလဲ။ စိတ်ချ စစ်တပ်က ဒီအဖြစ်မျိုး အဖြစ်မခံဘူး။ သူပဲရှေ့က နေချင်တာ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ အိမ်တအိမ်မှာ အရေးမပါတော့တဲ့သူ တွေရဲ့ အခန်းခဏ္ဍကို။
Reply	နွန် November 21, 2011 - 2:58 pm	do not believe them
they r playing trick for ethnicity
Reply	လုလု November 22, 2011 - 3:36 pm	“KIA ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင် တရက်တည်းနဲ့ အပြတ်အတတ် ချေမှုန်းပစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က မတိုက်ခိုက်ပါဘူး”..အပြောမကြီးပါနဲ့ ဦးကျော်ဆန်းရေ..တိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင် တိုက်လိုက်ပါလား..ဘာဖြစ်လို့အချိန်ကုန် စားစရိတ်ကုန်ခံ၊ လက်နက်ကုန်ခံပြီးအချိန်ဆွဲနေတာတုန်း..မတိုက်ပါဘူးကပြောနေတယ် ..တစ်ဖက်မှာတော့ စစ်ကြောင်းတွေပိုပိုထိုးလာတာကော..မတိုက်ချင်ပါဘူးဆိုရင် စစ်ကြောင်းတွေမထိုးပါနဲ့တော့ ရပ်လိုက်ပါတော့လာ..နင်ပဲပြောနေတယ် နင့်စစ်သားတွေကဟိုကချင်ပြည်မှာ ဘယ်တော့သေရမလဲဆိုပြီး ရှောင်ပြေးနေတယ်သိလာ..သူတို့ကမတိုက်ချင်ပဲတိုက်နေ
Reply	လုလု November 22, 2011 - 3:41 pm	ဦးဦးလူမျိုးကိုချစ်လို့ ရှေ့တန်းထွက်တဲ့သူတစ်ယောက်မှရှိမယ်မထင်ပါဘူး..အမိန့်ပေးလို့သာရှေ့တန်းထွက်တာနော်..ဘာပဲပြောပြော ကချင်လူမျိုးတွေက ကိုကိုယ်တိုင် ကိုယ့်အမျိုးကိုချစ်လို့ ရှေ့တန်းထွက်နေတာရှင့်..
Reply	ဇဇော် November 23, 2011 - 12:38 pm	စစ်တပ်ကပြောတော့လည်း သူတို့က စ မတိုက်ပါဖူးတဲ့ KIA ကပြောတော့လည်း
အပြစ်မဲ့ လူတွေကို သတ် မိန်ကလေးတွေ
ကို မုဒိမ်းကျင့် ရွာတွေဖျက်စီး သတင်းအမှန်သိချင်တဲ့ သူတွေက ဘယ်သူ စကား
Reply	ကိုတုတ်ကြီး November 23, 2011 - 9:39 pm	ဟုတ်ပ ဇဇော်ရာ …. ဒီကြားထဲ အပြစ်မဲ့တဲ့ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းကို ဗုံးဝင်ပစ်ထည့်သွားတဲ့ လူစွမ်းကောင်းကြီးတွေက ရှိသေးဗျ ….. ဘယ်လိုတွေပါလိမ့်ဗျာ ……. သတ္တိကိုအရေကျိုသောက်ထားသလားမှတ်ရတယ် > ဧကန္တတော့ သတ္တိဆိုတာ ဒီကောင်တွေ လက်မောင်းမှာ ဘုရားပွဲတုန်းက ထိုးထားတဲ့တက်တူးလို့များထင်နေကြသလားပဲနော် …..
Reply	မောင်မောင်နိုင် November 23, 2011 - 5:21 pm	လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ အမြင်ကျဉ်းစိတ်တွေကြောင့် နယ်ချဲ့ ကျွန်၊ စစ်တပ်ကျွန်ဖြစ်နေကြတာ။ ခုထိ လည်း သွေးကွဲနေကြတုံးပဲဆိုရင် ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေ စစ်တပ်ကျွန်ပဲဆက်ဖြစ်နေကြ လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
Reply	nature human November 24, 2011 - 2:17 pm	one day ! u Burma don’t know where is burma ok!
Reply	sein diamond November 24, 2011 - 5:42 pm	ဟိုစာတွေဖတ်နေတာတဲ့အရပ်ကတို့ရေ
Reply	ဘစ November 24, 2011 - 7:45 pm	ကဲ…တော်ကျပါတော့ဗျာ..ဒီထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ငြင်းအခုံတွေ…..တကယ်တော့ မြန်မာပြည်မှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ ထောင်ထောင်ဖြစ်နေတာက ကချင်လူမျိုးတွေဘဲဗျ…မင်းတို့ ကချင်လူမျိုးတွေ
ကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးမကျ သူများလည်း အားမပေးဘဲ နှိမ့်ချပြောဆိုတတ်တဲ့အတွက် ကြာလာရင်လူမျိုးစု ပျောက်သွားနိူင်တယ်…ရင်လေးစရာကွာ…
Reply	့hsetnaing November 24, 2011 - 7:49 pm	ဦးသန်းရွှေစားလိုက်အိပ်လိုက်စာဖတ်လိုက် အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းနေတာ ပျင်းဖို့ကောင်းမှာ
ပဲနော်….အတိတ်မကောင်းတော့လည်း တိုင်းသူပြည်သားတွေကို လူလုံးတောင် ထွက်မပြတော့ဘူး
Reply	ပန်းသမွန် November 24, 2011 - 10:07 pm	ဗမာသစွာ
Reply	thomas November 25, 2011 - 1:38 pm	ဦးကျော်ဆန်း စကားပြောဆင်ခြင်ပေးပါ ၊